जनताले हेमकर्ण रोज्लान कि सर्वध्वज ? - १७ पुष २०२६, बिहीबार ००:००, Purbodaya FM
जनताले हेमकर्ण रोज्लान कि सर्वध्वज ?
सुनसरी २ (क) को चुनावी चर्चा निकै छ । यसकारणपनि यसको चर्चा छ कि बामगठवन्धनका उमेदवार इटहरीका पूर्वमेयर सर्वध्वज सावाँ छन् भने कांग्रेसका तर्फवाट यूवा नेता हेमकर्ण पौडेल रहेका छन् । इटहरीमा सावाँलाई इमान्दार नेताको रुपमा र हेमकर्ण पौडेललाई साहसी र सक्रिय नेताको रुपमा व्याख्य गर्ने गरिन्छ । तर अहिले सावाँ र पौडेलले कसले जित्ला सवैको चासोको बिषय भएको छ ।
सुनसरी २ (क) स्थानिय तहभन्दा पनि सानो चुनावी क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा इटहरी उपमहानगरपालिकाको १,२,३,४,५,१६,१७,१८,१९ र २० नम्बर वडा रहेका छन्भने रामधुनी नगरपालिकाको ३ र ५ नम्बर वडा रहेका छन् । कुल मतदाता ६८ हजार ८ सय २० जना रहेका छन् । साँच्चै जीत कसको पक्षमा होला ? जनताले हेमकर्ण रोज्लान कि सर्वध्वज ? यसैको सेरोफेरोमा रहेर विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
उमेदवारले आफैले जित्छु भनेर दावी गर्छन् नै । सम्बन्धीत पार्टी र कार्यकार्ताहरुले पनि आफ्नो उमेदवारले जित्ने दावी गर्नु स्वभाविक छ । कांग्रेसको दावी यस क्षेत्रमा एमालेले सधैव आफ्नो वर्चस्व राखेको तर काम गर्न नसकेको भन्ने छ । एमालेको दावी इटहरीको आधुनिक विकासको जग आपूmहरुले नै गरेको भन्ने छ ।
चुनाव जित्ने केही पक्षहरु हुन्छन् । जस्तै पार्टीको संगठन र एकता, प्रचारप्रसार, माहोल र उमेदवारको हुलिया हुन् । नेपालको चुनावहरुको इतिहास नमिठो छ । यसमा अर्को एउटा पाटो पनि छ चुनाव हारजीतको त्यो हो पैसा । मौन अवधीमा हुने पैसाको चलखेल अन्तिम अवस्थामा आएर जीतको निर्णायक वनिदिन्छ । यो तितो सत्य हामीमाझँ जिवित छ । र यसपटकको चुनावमा पनि यो गलत अभ्यास हुन्छ । त्यसैले विश्लेषणहरु र स्वयम उमेदवारको विश्वास समेत लतमाथि भइदिन्छ परिणाममा ।
सर्वध्वज सावाँको दावी के छ भने इटहरीको आधुनिक विकासको जग आफैँ मेयर भएको समयमा (२०५४–५९) भएको हो । र फेरिपनि इटहरीको विकासलाई उच्च पार्न आफू योग्य रहेको साथै आवश्यकता पनि हो । उनले सर्वाजनिक रुपमा वा सञ्चारमाध्यमहरुमा पनि भनेका छन् –“जनताले लिएको परिक्षामा म उच्च श्रेणीमा पास भएको हुँ । संगठन पनि वलियो छ । फेरि वामगठवन्धले अझ रह्रो वनाएको छ । इटहरीलाई सुसंस्कृति सहर वनाउँन फेरि समयको माग मेरो जीत हो ।” यसरी उनले आफ्नो पुरानो विरासतलाई जीतको मापदण्ड मानेका छन् । तर ५९ पछिको इटहरीको विकासमा आफ्नो सक्रियता र भूमिकाको बिषयमा केही वोलेका छैनन् ।
हेमकर्ण पौडेल पनि आफूले सहज रुपमा जित्ने दावी गर्छन् । राजनीति र यो क्षेत्रको विकासका लागि आफू सत्य रहेको उनको दावी छ । उनले आफ्नो फेसवुक स्टाटसमा लेखेका छन् – “निर्बाचन जित्न कै लागि म जनता को माझमा झुट बोल्दिन किन कि मलाई थाहा छ जनता धेरै पटक दल बाट धेरै ठगिए।जित्नकै लागि म जात बेचेर अनि धर्म को सिरानी हाल्दिन किनकी मेरो पुस्ता को राजनीति ले सबै जात सबै भषा अनि सबै धर्म को बिच को आसमानता र विभेद को अन्त्य गर्दै एउटा सबै अटने देश, सबै हास्न सक्ने सबै ले मेरो देश हामी नेपाली भन्न सक्ने न्यायपुर्ण लोकतान्त्रिक र लोककल्याणकारी सबै खेल्ने र फुल्ने समाज निर्माण गर्दै २० बर्ष भित्र नेपाल लाई सार्क राष्ट्र सङ प्रतिस्पर्धामा लानु छ । ल्यसैले जस्ले जितोस प्रतिस्पर्धामा मलाइ स्वीकार छ तर अब देश र समाजले हार्नु हुन्न जनताको अदालतमा उभिएको छु । २१ मङ्सिरमा फैसला हुनेछ । फैसला जस्तो भए पनि निरन्तर सेबा गर्ने आत्मबिस्वास र साहसको कमि हुने छैन ममा ।” उनको अर्को तर्क छ अब नेतृत्व यूवा पुस्ताले गर्नुपर्छ । जनताको माझँमा सधैव काम गरे, जनताको विश्वास छ । र अहिले समयको आवश्यकताले मलाई खोजेको छ ।
विगतको तथ्याङ्कको झलक ।
संघियतामा पहिलो पटक भएको स्थानिय तहको निर्वाचनको तथ्याङ्कलाई हेर्दा एमालेले १६ हजार ४ सय १५ मत प्राप्त गरेको छ । माओवादी केन्द्रले ३ हजार २ सय ८ मत प्राप्त गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले १५ हजार ५ सय मत प्राप्त गरेको छ । तथ्याङ् अनुसार वामगठवन्धनको जम्मा मत १९ हजार ६ सय २३ हुन्छ । यसले के देखाउँछ भने ४ हजार १ सय २३ मतले कांग्रेस पछाडी छ । यसवाट मात्र विश्लेषण गर्दा सावाँले जित्ने तर्क गर्न सकिन्छ । तर तथ्याङ्कको अर्कोपाटो छ अन्य पार्टीको मत ३ हजार ५६ छ । स्थानिय तहको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा सावाँको पल्ला भारी छ । अस्तिकै मत सतप्रतिशत अहिले आउँछ भनेर भन्न सकिदैन् ।
संगठनको अवस्था र एकता ।
दुवै पक्षले आफ्नो संगठन वलियो भएको दावी त गरेका छन् । उनिहरुले जेजस्तो दावी गरेपनि पार्टीभित्रको असन्तुष्टी दुवैतिर छ । टिकट नपाउँनेहरुको असुन्तुष्टी मात्र होइन चुनावमा उचित भूमिका नदिएको सम्मका असन्तुष्टीहरु छन् । व्यक्तिगत रुपका टकरावहरुपनि छन् । कांग्रेसतिर हेर्ने हो भने स्थानिय तहमा इटहरीको मेयरमा रोहित प्रसाईले उमेदवारी पाउँदा हेमकर्ण पक्षले त्यसको विरोधमा निकालेको सडक प्रदर्शनले पनि अहिले उनलाई नोक्सान पुर्याएको छ । उता पुराना कांग्रेसहरु पनि हेमकर्णको उमेदवारीमा सन्तुष्ट देखिदैनन् । यता वामगठवन्धनतिर हेर्दापनि सावाँको उमेदवारीमा एकपक्षको विरोध नै छ । नयाँले अवसर खोजिरहेका वेला उमेर ढल्किन लाग्दा समेत दोहोर्याएर टिकट दिएकोमा असुन्तुष्टी देखिन्छ ।
प्रचारप्रसारको झलक ।
चुनावमा संगठन वलियो छ, सधैव हामीले जितेको ठाउँ भनेरमात्र हुँदैन् । प्रचारप्रसारको तौर तरिकाले पनि भर निकै महत्व राख्छ । हेमकर्ण पौडेर र सर्वध्वज सावाँ दुवैको प्रचारप्रसार शैली तथा प्रभावलाई मूल्याङ्कन गर्दा पौडेल नै अगाडी देखिन्छन् । मिडिया कभरेज, सामाजिक सञ्जाल र माउथ पब्लिसिटीमा पौडेलको अग्रता निकै छ सावाँको तुलनामा । हेमकर्ण पौडेलले आफ्नो नीजि सचिवालयलाई समेत व्यवस्थित गर्न खोजेका छन् । तर उनको सचिवालयमा फोन रिसिभ गर्नेहरुको व्यवसायिकता कम देखिन्छ ।
कोणसभा तथा घरदैलो कार्यक्रम समेत पौडेलकोमा गुणवता र संख्यात्मकतामा वढी देखिन्छ ।
चुनावी माहोलको पक्षता ।
सरर्र हेर्दा चुनावी माहोल उग्र रुपमा देखिदैन् । सुस्त–सुस्त गतिमा छ सवैको । सायद चुनावको गर्मी लागिसकेको छैन् । अहिले २ (क) मा दुईवटा कुरा देखिएको छ ।
पहिलो हेमकर्ण पौडेल सामाजिक काममा समेत निकै सक्रिय रहदै आएका र युवाहरुमाझँ अलिक लोकप्रिय रहेका हुँदा युवा मतदाता तथा नयाँ मतदाताले पार्टीभन्दा पनि उमेदवार हेरेर भोट हाल्ने देखिन्छ । म अफैँले गरेको सानो अध्यनमा पनि प्रत्यक्ष हेमकर्ण पौडेललाई अनि समानुपातिक आफ्नै पार्टीलाई भन्ने मानिसहरु निकै भेटिए । नयाँ र युवा मतादाताको झुकाव अलिक हेमकर्णतिर देखिन्छ ।
दोस्रो वामगठवन्धका कारण शक्तिशाली वनेका एमाले र माओवादी केन्द्रप्रति के वुझाई भएको पाइएको छ भने हेमकर्ण पनि ठिकै हो तर सवै वामहरुले जित्ने भएकाले सर्वध्वजलाई मत हाल्नु सही भन्नेमा छन् । यहाँ स्थानिय तहको नेतृत्व पनि कम्युनिष्टकै, प्रदेश र केन्द्रमा समेत कम्युनिष्टहरुको वहुमत आउँने सम्भावना भएकाले सावाँलाई भोट हाल्ने सम्भावना उतिनै छ ।
वामगठवन्धले भनेजस्तो सावाँको जीतपनि सजिलो छैन् । स्थानिय तहको निर्वाचनलाई नै हेर्दापनि पहिले एमालेले कब्जा जमाएको क्षेत्रमा आधा वडाहरु कांग्रैसले फुत्कायो । यसरी इटहरीमा कांग्रेस दह्रो हुनुमा सभापतिको हैसियतले हेमकर्णलाई जान्छ यसको श्रेय । त्यसवाट यो क्षेत्रमा कांग्रेस र समर्थकहरुलाई हौसला थपिएको छ । यसलाई वामगठवन्धनले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन् । सावाँ इटहरीका पूर्व मेयर भएपनि अहिले चुनाव क्षेत्रमा परेका आधा भाग इटहरीमा थिएन त्योवेला ।
हेमकर्ण पौडेललाई पनि काहाँ सजिलो छ र उनकै पार्टीभित्र हराउँनका लागि लाग्ने समुहपनि सक्रिय छ । वामहरुको एकताको सन्देशले तटस्थ मानिसहरुको झुकाव सर्वध्वजतिर देखिएको छ । उनको लागि सबभन्दा दह्रो भरोसा भनेको नयाँ र युवा मतदाता हुन् ।
जेहोस् चुनाव निकै प्रतिष्पर्धा छ दुईविच । थोरैमात्र मतको मतान्तर हुनेछ जीतको । अहिलेको माहोल, मतदाताको मनस्थिती, प्रचारप्रसार, घरदैलो, कोणसभा र मिडिया साहनुभूतिलाई मध्यनजर गरी हेर्दा दुवै बराबरीमा छैनन् । यी सबैकुरामा कांग्रेस उमेदवार हेमकर्ण नै अगाडी देखिन्छन् । तर मिड फिल्डमा मात्र राम्रो खेलेर हुँदैन् । पोलमा पुगेपछि गोल लगाउँन सकिएन भने ।
एउटा पक्षवाट हेर्दा सावाँको जीत हुने सम्भावना वढी देखिएपनि अर्को पाटोबाट हेर्दा हेमकर्णको जीतको सम्भावना उतिकै छ ।
८ मंसिर २०७४, शुक्रबार ०७:४० मा प्रकाशित